Nickel Wire Mesh, Expanded Metal Wire Mesh, Ashiselwe Wire Mesh - Ansheng
Lashukumisa akuyona insimbi noma ingxubevange; kuyinqubo lapho kusetshenziswa khona i-zinc enamathela evikela insimbi ukuvimbela ukugqwala. Emkhakheni wezintambo zocingo, noma kunjalo, uvame ukuphathwa njengesigaba esihlukile ngenxa yokusetshenziswa kwayo okubanzi kuzo zonke izinhlobo zezicelo. Futhi kungenziwa ngocingo lwensimbi bese i-zinc enamathela nge-galvanized. Ngokuvamile, le nketho ibiza kakhulu, inikela ngezinga eliphakeme lokumelana nokugqwala ...
Insimbi engenalutho, eyaziwa nangokuthi i-carbon steel, iyinsimbi esetshenziswa kakhulu embonini yemishini yocingo. Ngokuyinhloko yakhiwe ngensimbi kanye nenani elincane lekhabhoni. Ukuthandwa komkhiqizo kungenxa yezindleko zawo eziphansi nokusetshenziswa kwawo kabanzi. Plain wire anezikhala, owaziwa nangokuthi balck yensimbi indwangu .black wire anezikhala .it senziwa ongaphakeme carbon steel wire, ngenxa izindlela ezahlukene ukwelukwa .can ihlukaniswe yaba, eluka plain, aluka Dutch, herringbone aluka, plain Dutch eluka. Plain steel wire anezikhala kuyinto stro ...
Ashiselwe wire anezikhala wenziwe eliphezulu ongaphakeme-carbon steel wire, kusetshenzwe ngokunemba othomathikhi futhi kunembile imishini imishini indawo Welding, bese electro lashukumisa ashisayo-bacwilisa lashukumisa, PVC nezinye ukwelashwa ebusweni passivation kanye plasticization. Okubalulekile: Intambo yensimbi yekhabhoni ephansi, ucingo lwensimbi engagqwali, njll. Izinhlobo: insimbi eshisiwe yensimbi enamathele, i-PVC eshiselwe ucingo olunezikhala, iphaneli elinamakhemikhali ashiselwe, insimbi engagqwali eshiselwe i-wire mesh, njll Ukwaluka nezici: lashukumisa ngaphambi kokuluka, ...
I-mesh yensimbi enwetshiwe iyinto yensimbi eyakhiwe ngomshini owandisiwe wokushaya ngensimbi nomshini wokugunda ukwakha i-mesh. Okubalulekile: Ipuleti le-Aluminium, ipuleti lensimbi engaphansi, ipuleti lensimbi engagqwali, ipuleti le-nickel, ipuleti lethusi, i-aluminium magnesium alloy plate, njll. Ukwaluka nezimpawu: Kwenziwa ngokunyathela nokwelula ipuleti lensimbi. Ubuso be-mesh bunezici zokuqina, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokushisa okuphezulu, nomphumela omuhle wokungenisa umoya. Izinhlobo: Isivumelwano ...
Inkampani yethu ibhizinisi eligxile ekukhiqizeni nasekuthengiseni izinsimbi ezahlukahlukene zensimbi yocingo kanye nemishini yokuhlunga. Imikhiqizo sisetshenziswa kabanzi imishini, petrochemical, plastic, yokusansimbi, eyenza imithi, ukwelashwa kwamanzi kanye nezinye izimboni. Inkampani yethu inezinto zokukhiqiza nokuhlola ezithuthukile, ukuphathwa okuqinile kwesayensi nokulawulwa kwekhwalithi. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yentuthuko, sekuyibhizinisi lesimanje elihlanganisa i-R & D, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa, kanye nensizakalo. Ngaphezu kokwanelisa amakhasimende asekhaya, imikhiqizo yethu Futhi ithunyelwa e-United States, eBrazil, eJalimane, ePoland, e-Australia, eNew Zealand, eTaiwan nakwamanye amazwe nezifunda.
Insimbi enwetshiwe yishidi lensimbi eliqhekekile labe selelulwa ukwakha idayimane noma isitayela esinamacala ayisithupha Abantu bangayisebenzisa ngezindlela eziningi Imininingwane ebhalwe ngezansi: Imicu yimicu yensimbi ehlukanisiwe ngawodwana, noma izinhlangothi zokuvulwa kwedayimane. I-SWD, noma i-Short Way of Design, ibanga eliphakathi kwep ...
Isikrini se-Extruder sisezinhlotsheni ezahlukahlukene zocingo olunqunyiwe
Izinto zokwakha ikakhulukazi insimbi engenalutho, insimbi engagqwali nokunye okokusebenza. amaphakethe wesikrini sensimbi engagqwali ayamelana nokugqwala kunamanye ama-materail. Izikrini ze-Stainless Steel Extruder zisetshenziswa kabanzi kupulasitiki weshidi extruder,, i-granulator, nezindwangu ezingasuki, umbala we-masterbatch, njll. Mesh: ...
Incazelo yomkhiqizo I-nickel wire mesh ibhekisa emikhiqizweni yensimbi yocingo yensimbi eyenziwe ngezinto ezihlanzekile ze-nickel (ucingo lwe-nickel, ipuleti le-nickel, ucwecwe lwe-nickel, njll.) ngokuqukethwe kwe-nickel okungu-99.5% noma ngaphezulu. Ngokwenqubo yokukhiqiza, imikhiqizo ihlukaniswe ngezinhlobo ezilandelayo: A. I-Nickel w ...
I-epoxy caoted wire mesh
1. Igama lomkhiqizo / isidlaliso: I-epoxy camera mesh wire, epoxy coating mesh, electrostatic coating mesh, hydraulic filter filter mesh, hydraulic filter mesh, hydraulic filter mesh mesh, filter support mesh, epoxy window screen mesh. 2. Ukwethulwa okuningiliziwe komkhiqizo: I-epoxy Yezimboni ifakwe ...